कीर्तिपुरमा बसेर नेदरल्याण्डको धाक ! नक्कली आइडी बनाएर ४२ लाख ‘पच’ « Lokpath
२०७७, १४ पुष मंगलवार २२:३२
कीर्तिपुरमा बसेर नेदरल्याण्डको धाक ! नक्कली आइडी बनाएर ४२ लाख ‘पच’
काठमाडौँ– सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी लाखौँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा पूर्वी रुकुम घर भई हाल काठमाडौँको कीर्तिपुर बस्ने २२ वर्षीय सन्तोष श्रेष्ठ र सोही ठाउँकी १९ वर्षीया आशा श्रेष्ठ रहेका छन् । उनीहरुलाई काठमाडौँको सुन्धाराबाट पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीका लागि आज महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा बुझाएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पहिचान नखुलेका शवहरुको अस्थायी समाधि बनाई अभिलेख राख्न
घाँसको भारी बोकेर घर फर्किदै गरेकी महिलामाथि गोली प्रहार
काठमाडौं । रोल्पामा जंगलबाट घाँसको भारी बोकेर घर फर्किदै गरेकी एक महिलामाथि गोली
सप्तरीमा बाल विवाह गराउने ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । सप्तरीमा बाल विवाह गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले ४